Desambra 2019 | RayHaber | raillynews
Volana: Desambra 2019
Nisondrotra ny vidin'ny fitateram-bahoaka ao Bursa! Taratasy vaovao amin'ny Tari-dàlana vaovao 1 Janoary
Ny vidin'ny fitateram-bahoaka ao Bursa! Ny mpianatra dia navahana tamin'ny lalàna vaovao momba ny vidin'ny fitateram-bahoaka any Bursa tamin'ny 1 Janoary 2020. Araka izany, 4 taona lasa izay dia 1,5 TL no nampihatra tamin'ny board board [More ...]
Istanbul Metro dia nitondra fiara efa ho 700 tapitrisa
Istanbul Metro dia nitondra fitaterana efa ho 700 tapitrisa; Ny metro, izay tiana ho an'ny fitaterana haingana sy malefaka dia nanompo ny mponina tao Istanbul tamin'ny hafainganam-pandeha tanteraka tamin'ny taona 2019 ihany koa. Saika 700 tapitrisa ireo mpandeha mandritra ny taona [More ...]
Ny fivorian'ny Birao mpitantana ny Institution dia natao ho an'ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny TÜDEMSA Director Direction Générale ary voavaha ny fangatahana. Nandritra ny fivoriana izay natao ny alakamisy 2019 desambra 26, ny fangatahana sy soso-kevitr'ireo mpiasan'ny TÜDEMSAŞ, Memur-Sen [More ...]
Hafatra amin'ny Taona Vaovao avy amin'ny Turhan, Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa
Mankalaza ny taom-baovao amin'ny firenentsika, ny firenentsika sarobidy ary ny olombelona rehetra izy. Maniry aho ny taona 2020 ho herintaona izay nitombo ny fanantenana, nanjaka ny fandriampahalemana eran'izao tontolo izao ary nahazo hery ny fahatsapana ho namana, firahalahiana ary firaisankina. Taom-baovao, [More ...]
Ny fototry ny rafitry ny rafitry ny lalamby roa dia hapetraka ao Kayseri amin'ny 2020
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, 2020 ho taona iray hanamarihana ny ho avin'i Kayseri, hoy izy. Ny filoha Büyükkılıç, Kayseri, tsy ho an'ny ho avy anio ihany koa dia tena ilaina amin'ny tetikasa [More ...]
Vaovaon'ny Taom-baovao TCDD General Yazıcı
Amin'ny maha Tale foibe Jeneralin'ny fitaterana TCDD, dia nandao ny herintaona izay nanolorantsika tolotra vaovao sy kalitao ho an'ny olom-pirenenay nohajaina izahay. Ny manan-danja indrindra ampahany amin'ny tontolo maoderina indrindra fa eo amin'ny sehatry lalamby, izay voasoratra anarana zava-bita lehibe any Torkia [More ...]
Marmaray dia hanompo mandra-pahatongan'ny Taom-baovao
Mba hamahana ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpandeha noho ny Taom-baovao, dia hiasa hatramin'ny 02.00 ihany ny fiaran-dalamby fiofanana amin'ny lamasinina Marmaray. Ny lamasinina Marmaray dia mandeha eo anelanelan'ny tobin'ny Zeytinburnu-Söğütlüçeşme amin'ny 31 Desambra, amin'ny fe-potoana 15 minitra. [More ...]
Sambo mamelana trano any Çambaşı Doğa Vonona ho amin'ny vanim-potoana
Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Mehmet Hilmi Güler dia manao fampiasam-bola lehibe ao Ordu mba hiaina fizahan-tany mandritra ny taona ary indrindra hamelomana indray ny fizahantany amin'ny ririnina miaraka amin'ny teny slogan Ordu Ordu tsy maharitra 3 volana fa mandritra ny 12 volana Ordu. [More ...]
Staf Metrobus eoropeana sy ny sarintany Metrobus
Sehatra eropeana Metrobus eropeana sy sarintany Metrobus: Azonao jerena daholo ny fiatoan'ny Metrobus amin'ny sarintany iray, izay fijanonan'ny metrobus akaiky indrindra amin'ny alehanao sy ny fijanonan'ny metrobus amin'ny alehanao. [More ...]
Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Ny tafika Ordu an'i Mehmet Hilmi Güler tsy 3 volana fa ny 12 volana. Mba hisedra ny ririnina any Ordu, kaominina Metropolitan, Akkuş [More ...]
ANTRAY sy ny Bus an'ny tanàna dia maimaim-poana raha tsy amin'ny Taom-baovao
Fitaterana maimaimpoana amin'ny alin'ny Taom-baovao. Fanomezana vaovao ho an'ny Ben'ny tanànan'i Antalya Muhittin Böcek ho an'ireo mponina ao Antalya. Ireo fiara fitateram-bahoaka ofisialy ho an'ny Kaominin'i Metropolitan sy ANTRAY dia hanome serivisy maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena mandra-pahatongan'ny taom-baovao. [More ...]
Hitohy hatramin'ny 02.00 izao ny fanandramana Akçaray
Fitaterana, sampana iray ao amin'ny Kaominina Metropolitan Kocaeli, dia nanambara fa hiasa mandra-pahatongan'ny 02.00 amin'ny fotoan'ny Taom-baovao ny Akçaray. Akçaray'ın ny andro voalohany amin'ny taona tamin'ny 1 Janoary 2020 amin'ny 02.00:30 ka hatramin'ny XNUMX minitra isaky ny XNUMX minitra [More ...]
Nanao fanambarana tamin'ny taona 2019 ny Filoha Soyer
Ny ben'ny tanànan'i İzmir Tunç Soyer dia nanomboka ny andro farany tamin'ny taona niaraka tamin'ny fitateram-bahoaka. Nomen'i Soyer ny voninkazo sy ny plake tamin'ny mpandeha faha-18 tapitrisa teo ambonin'ny sambo ary ny mpamily 1 tapitrisa mampiasa ny ferry. Izmir [More ...]
2019 no Taom-pamokarana ho an'i İzmir
Ny Kaominina Metropolitan İzmir dia namatsy vola 2019 miliara TL tamin'ny taona 3,3. Ny 41 isan-jaton'ny fandaniana amin'ny fampiasam-bola Metropolitan dia nitombo 16 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa. Izmir Metropolitan kaominina, [More ...]